Zimbabwe Council of Churches Archives - What's On In Harare
Home Zimbabwe Council of Churches
Source: ZCC calls for equal access to natural resources – NewsDay Zimbabwe BY MIRIAM MANGWAYA THE Zimbabwe Council of Churches (ZCC) says inequalities in the mining sector were derailing efforts by the industry to address the socio-economic problems in communities. Speaking during an alternative mining indaba held virtually this week, ZCC’s Martha Mutswarakati of the […]
The post ZCC calls for equal access to natural resources appeared first on Zimbabwe Situation. Zimbabwe Situation …
Harare News 19 August 2020
Zimbabwe Council of Churches Statement Source: Echoing “The march is not ended” – The Zimbabwean The Zimbabwe Council of Churches (ZCC) read with grave concern, the governments response to the Zimbabwe Catholic Bishops’ Conference (ZCBC) pastoral letter of the 14th of August 2020 entitled “The March is not Ended”. The government response presented by Mrs […]
The post Echoing “The march is not ended” appeared first on Zimbabwe Situation. Zimbabwe Situation …
Harare News 17 August 2020
Source: Zimbabwe Council of Churches releases letter supporting Catholic Bishops – Savanna News The Zimbabwe Council of Churches has released a statement in support of Zimbabwe Catholic Bishops’ Conference currently under fire from government for voicing their concern over deteriorating standards of living, political crisis and human rights abuses. The letter was published by Dr […]
The post Zimbabwe Council of Churches releases letter supporting Catholic Bishops appeared first on Zimbabwe Situation. Zimbabwe Situation …